'एसएलसी फेल भएपछि खेतीकिसानी गरें' ⋆ JINDAGANI.COM
Home » ‘एसएलसी फेल भएपछि खेतीकिसानी गरें’
जेष्ठ २०, २०७८	1	By शकुन्तला जोशी
नेपाली सिनेमामा ‘इन्ट्री’ मारेपछि दयाहाङ राईले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । सिने क्षेत्रमा ‘लङ रेसका घोडा’ सावित हुँदै गर्दा उनले पछाडि फर्किने फुर्सद नै कहाँ पाए र ! यसबीच चार दर्जन हाराहारी चलचित्र अभिनयमा अब्बल साबित भइसकेका दयाहाङ ‘स्टारडम’को चम्किलो घेराभित्र छन् । तर अझै पनि उनको मन भने त्यो चम्किलो घेराभित्रबाट फुत्केर भोजपुरको पिखुवा खोला पुगिरहन्छ । दुवाली फर्काउँछ र माछा समात्छ । मसिना माछाका भुरा घरछेउको पोखरीमा छोडिदिन्छ र ठान्छ– ती उनका साथी भए ।
उनलाई तोरीबारीमा चंगा उडाउन मन छ । पुर्खालाई भाकेर धनुकाण चलाउन मन छ । कवि श्यामलको कविताले भने झैँ हतारमा यात्रा गर्दा के–के छुटे हुन् जीवनमा ? उनी सम्झनाको लहरो तान्दैतान्दै गाउँ पुग्छन् । कोरोना कहरले दिएका अनेक तनावलाई बिर्सने हो भने लकडाउनले दिएको गाउँ सम्झने फुर्सदलाई एउटा सुकिलो पक्ष मान्न सकिएला । यही वहानामा दयालेमात्रै होइन, धेरैले गाउँ सम्झिए l
दयाहाङ राई l फोटो स्रोत: राई फेसबुक
‘तन्नेरी वय, चुलबुले मन, अनि प्रेम कहानी, को पढोस् पाठ्यक्रमका किताब । कोविदका किताब पढ्न थालेपछि भोक नै हराउँथ्यो । मनमा अर्कै प्रेमिल संसार बन्दै जान्थ्यो । त्यो बेला किताबभित्रका धेरै पात्र मै हुँ जस्तो लाग्थ्यो । नबुझेरै कथाको पात्रमा रुपान्तरण हुन त्यही बेलादेखि सिकिएछ ।’
बाल्यकालमा दयाहाङ राई
वर्षौंदेखि उनी झिलिमिली राजधानीमा छन् । उनको गाउँमा भने परार मात्रै बत्ती पुग्यो । गाडीको बाटोले गाउँ जोडेको चाहिँ एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । उनले भने कलेज पढ्न लागेपछि फुपू भेट्न दमक जाँदा पहिलोपल्ट गाडी देखेका थिए ।
दयाहाङ राई साथीहरूसँग
किशोर दयाहाङ राई
मण्डला थिएटरका संस्थापक उनलाई थिएटरमा मज्जा लाग्ने पनि तिनै कुरा हुन् । सानो छँदा उनी यस्ता प्रयोग गर्नुपूर्व त्यसको इन्जिनियरिङ स्केच तयार गर्थे । थिएटरमा काम गर्न त्यसले उनलाई धेरै सहयोग गर्‍यो । थिएटरमा सेट बनाउने कुरा होस् या प्रकाश व्यवस्थापनमा, त्यही चिजले धकेलेको हो भन्ने उनलाई लाग्छ । अहिले पनि थिएटरका लागि चाहिने काठका सबै सामग्री बनाउन सक्छन् ।
आमाले सुनाउने किराँती लोककथामध्ये ‘धनुको कथा’ आफ्नै वंशजसँग सम्बन्धित थियो । उनलाई धनु चलाउन खुब मन पर्ने, तर राईहरूले धनु चलाउन पूजा गर्नुपर्ने परम्परासँग कथा सम्बन्धित थियो । उनको वंश माङ्पाहाङ र पारि गाउँको वानु वंश । ती दुई वंशका बस्तीको बीचमा खानेपानीको मूल एउटै थियो । दुई वंशबीच बेला–बेला खुब कचिङ्गल हुने रे ! पानीको निहुँमा झगडा नहोस्, युवायुवती नबिग्रिऊन् भन्ने हेतुले दुई वंशबीच अबदेखि भाइभाइ भएर रहने भन्ने सहमति बनेछ । त्यसपछि कैयौं पुस्ता उनीहरूको बिहेवारी चलेन । तर, हाल उनका दाजुको पुस्तादेखि भने धनु साटेर भाइभाइको वाचा फुकाएर बिहेवारी सुरु भएको छ । नत्र भने बिहेवारी गर्न खोला तरेर नौ डाँडापारि नै पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसका लागि बनाइएको अनुशासन रहेछ ।
युवा दयाहाङ राई
एसएलसी पास भएपछि उनले भोजपुर क्याम्पस पढे । त्यो अवधिमा उनले आफूलाई चिन्ने हेर्ने कोसिस गरे । उनलाई लाग्यो, ‘आफूले खोजेको भविष्य त्यो होइन कि भनेर आफूभित्र खोज गरेँ । त्यसअघि पढ्न स्वतन्त्र थिएँ, पढें । मनलागेको अन्वेषण, प्रयोग गरें ।’
Tagsदयाहाङ राई नेपाली सिनेमा लुक ब्याक
Raju Pithakote says:
बधाई !!गज्जब छ। मन छुने जीवनकाल !!